Philipp Lahm : Bayern Munich walwal wayn ayey ka qabtaa Arsenal
Home Sports Philipp Lahm : Bayern Munich walwal wayn ayey ka qabtaa Arsenal
Kabtanka kooxda Bayern Munich Philipp Lahm, iyo macalinkiisa Jupp Heynckes iyo xiddiggaha kala ah Bastian Schweinsteiger iyo Thomas Muller waxa ay dhammaan ka walwalsan yihiin ciyaarta ay la ciyaari doonaan horiyaalka Champions League oo la isku arki doonaan kooxda Arsenal.
Kabtan Philipp Lahm ayaa sheegay in kulanka ay la lee yihiin Arsenal in uu yahay mid aad looga walwalo waayo ayuu yiri kooxda Ingiriiska ka socota waxaa laga ciribtiray koobka FA Cup oo ay ka adkaatay kooxda Blackburn.
Laham ayaa wariyaasha maanta u sheegay in xiddigaha macalin Arsene Wenger ay caaboon yihiin oo diyaar u ah in ay guul soo hoyaan.
“Arsenal waa khatar, gaar ahaan dhinaca weerrarka waxaan aaminsanahay in ay tahay dhibaato nagu soo wajahan . waxa ay heestaan ciyaartooy aad u fiican laakin waan dedaali doonaa,” ayuu yiri Lahm.
Tababaraha kooxda Bayern Jupp Heynckes ayaa sheegay in xiddigihiisa ay wax walwal sidaas u buuran ka qabin naadiga Gunners-ka.
Sidoo kale xiddigaha Bayern Bastian Schweinsteiger iyo Thomas Muller ayaa iyana sheegay in walwalka jira uu yahay kulanka habeen dambe in laga badin doono iyo kooxda Bavarians.
“Arsenal waa koox khatar ah laakin kama walwaleyno waana iska celin doonaa . Waxaan sameen doonaa wax kasta oo aan ku dheeli tiri karno ciyaarta wax kasta hanagu qaadato,”ayu yiri Schweinsteiger